Germany na-ekwupụta mmachibido iwu ọhụrụ maka enweghị ọgwụ mgbochi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany » Germany na-ekwupụta mmachibido iwu ọhụrụ maka enweghị ọgwụ mgbochi
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
N'okpuru mmachibido iwu ọhụrụ, a ga-egbochi ndị anaghị agba ọgwụ mgbochi n'ụlọ nri, ụlọ ihe nkiri na ụlọ ahịa na-adịghị mkpa. A ga-emechikwa ụlọ oriri na ọṅụṅụ n'ebe ọrịa na-efe efe, ebe nnukwu ihe omume ga-eme ka ọnụ ọgụgụ ndị na-ekiri ebelata.
Chancellor nke Germany na-apụ apụ Angela Merkel akpọkuola ndị isi nke steeti gọọmentị etiti iri na isii nke Germany ka ha kpebie mmachi ọhụrụ nke mba maka ndị na-enweghị ọgwụ mgbochi megide COVID-16.
Onye isi ala kwuru na enwere ike ịmanye ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa site na February. Ọ gbakwụnyere na nha dị otú ahụ ga-achọ nkwekọrịta nke Bundestag na usoro iwu kwesịrị ekwesị.
Merkel kwuru banyere "omume nke ịdị n'otu mba" nke dị mkpa ugbu a iji belata ọrịa na taa, GermanyNdị isi mpaghara kwenyere na Chancellor, n'agbanyeghị, n'oge ọrịa a niile, ndị isi steeti nweere onwe ha ikpebi usoro Covid nke ha.
Gọọmenti German ga-amachibido iwu obodo niile na ụmụ amaala na-enyeghị ọgwụ mgbochi na mbọ iji nwetaghachi ọrịa COVID-19 na-arị elu ma belata nrụgide dị ukwuu n'ụlọ ọgwụ ka ụjọ na-etolite maka ụdị Omicron.
Naanị mmadụ 50 gbara ọgwụ mgbochi na ndị gbakere ka a na-ahapụ ka ha zute n'ime ụlọ. Ihe ruru mmadụ 200 nwere ike zute n'èzí.
N'ikwu okwu taa, Mịnịsta na-ahụ maka ahụike na-apụ apụ Jens Spahn gwara televishọn ZDF na atụmatụ a bụ n'ezie "mkpọchi maka ndị na-enweghị ọgwụ mgbochi." Ọ gbakwụnyere, "Ihe karịrị nde mmadụ 12 ndị okenye na-anaghị etinye ọgwụ mgbochi ọrịa bụ ihe na-akpata ihe ịma aka maka usoro ahụike."
Germany ebidola mgbasa ozi ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa n'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ ikpe na-arị elu. Agbanyeghị, ọ bụ naanị 68% nke ndị bi na ya ka etinyere ya kpamkpam megide nje a, n'okpuru nkezi maka ọdịda anyanwụ Europe.
Dabere na Robert Koch Institute of ọrịa na-efe efe, Germany debara aha 73,209 ọrịa COVID-19 ọhụrụ yana ọnwụ 388 na Wednesde.
Agbata obi Austria akpọchiela kpam kpam izu atọ. A gbatịkwara mkpọchi ụbọchị iri site na Nọvemba 22 maka ụbọchị iri ọzọ, nke na-adị ugbu a ruo Disemba 11. Obodo a kpọchiri naanị ndị na-agbaghị ọgwụ mgbochi.
Chancellor Alexander Schallenberg rịọrọ mgbaghara maka ụmụ amaala gbara ọgwụ mgbochi maka mmachi siri ike. Austria ga-enye iwu ọgwụ mgbochi COVID-19 site na February 1, na-abụ obodo mbụ na Europe webatara ụdị ahụ.